Supply Angle Valves, Brass Angle Valve, Angle Seve Valve၊ တရုတ်ပေးသူမှ Angle Seat Valve
SHENZHEN KING OF SUN INDUSTRY CO.,LTD [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , Other Markets , West Europe , North Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:81% - 90% Cert:ISO9001, CE, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ထောင့်အဆို့ရှင်,ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင်,ထောင့်ထိုင်ခုံ Valve,ထောင့်ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ထောင့်အဆို့ရှင်
ထောင့်အဆို့ရှင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ထောင့်အဆို့ရှင်, ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ထောင့်ထိုင်ခုံ Valve R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
နှစ်ခုထဲကတစ်ခုထဲကကြေးဝါ Angle Valve
Cross Handle Swivel Switch ပါသောကြေးဝါ Angle Valve
ငွေရောင် Chrome အရောင်ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် 1/2 လက်မ
ရေ Faucets များအတွက်ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင်
အရွယ်အစား G1 /2"X ကို G1 / 2" နဲ့ Lever Angle Valve
လှည့်လက်ကိုင်နှင့်အတူ 1/2 လက်မထောင့် Stop Valve
ချိတ်ဆက်မှုအရွယ်အစား G1 /2"X G1 / 2" နှင့်အတူထောင့်အဆို့ရှင်
ခရုမ်း Plated နှင့်အတူ Faucet ဆက်စပ်ပစ္စည်း Angle Valve
G1 /2လက်မပြွန်များအတွက် Wall-Mount Angle Valve
ရေချိုးအင်တုံ Angle Valve Connector
Wall Plate နှင့်အတူကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် Chromed
ထိတွေ့မြို့ရိုးတစ်ခုတည်း Hole Angle Valve တပ်ဆင်ထားသည်
Flange Polished Chrome ဖြင့်ရေ Angle Stop Valve
dual-ရည်ရွယ်ချက်ထောင့်အဆို့ရှင် အရည်အသွေးမြင့်ကြွေအဆို့ရှင် core ကိုကြေးဝါ Angle Valve မှာ chrome မျက်နှာပြင် finish ကို - ကို dual ရည်ရွယ်ချက်ထောင့်အဆို့ရှင်အထဲကနှစ်ယောက် Integrated ချပစ် H59 ကြေးဝါကို လုပ်. , မြင့်မားတဲ့အတွက်တဦးတည်း။ 360 ဒီဂရီလည်ပတ် switch သည်။ angle ထိုင်ခုံ Valve စသည်တို့ကို, လုံခြုံကျန်းမာ,...
ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် လက်ကိုင်ဆုံလည် switch ကိုအတူ အရည်အသွေးမြင့်ကြွေအဆို့ရှင် core ကို, chrome မျက်နှာပြင် finish ကို - H59 ကြေးဝါကို Integrated ပစ်မြင့်မား၏ဖန်ဆင်းသောကြေးဝါ Angle Valve 1/2 လက်မပြည်တွင်းရေးချည်ထောင့်အဆို့ရှင်။ မီးဖိုချောင်သို့သော်လည်းကောင်း၊ ရေချိုးခန်းတွင်သော်လည်းကောင်းဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတာရှည်ခံသည်။...
Angle valves သည်ဘုံဘိုင်များ၊ အိမ်သာများ၊ ရေအပူပေးစက်များနှင့်အခြားရေပူရေအေးပိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရေဖိအား၏အရွယ်အစားကိုထိန်းညှိပေးပြီးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသောအခါရေလမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဒီ Angle Globe Valve သည် H59 ကြေးဝါနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကြွေအဆို့ရှင်အမာခံ၊...
ရေ Faucets များအတွက်ကြေးဝါ Chrome ကိုပြီးအောင်ထောင့်အဆို့ရှင် နေရာလေးကိုရဲ့ထောင့်အဆို့ရှင်ကဘေးကင်းလုံခြုံကျန်းမာ, Non-အဆိပ်သင့်, ဒီ Angle ကမ္ဘာလုံး Valve ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်စသည်တို့ကိုမီးဖိုချောင်စုပ်, ရေချိုးခန်းအင်တုံ, အိမ်သာ, ရေပူစက်လျှောက်ထား H59 ကြေးဝါကိုပေါင်းစပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်ကြွေအဆို့ရှင်အမာခံ၊...
ရေ Faucets များအတွက်ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် ရေယိုစိမ့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပြproblemနာကိုမှသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ မီးဖိုချောင်စုပ်ရေ၊ ရေချိုးခန်းအင်တုံ၊ အိမ်သာ၊ ရေပေးစက်စသည့်ရေပေးဝေသည့်အခါထောင့်အဆို့ရှင်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ အန္တရာယ်ကင်း။ ကျန်းမာခြင်း၊ အဆိပ်မရှိသောကြောင့် H59...
အရွယ်အစား G1 /2"X G1 / 2" နှင့်အတူလီဗာထောင့်အဆို့ရှင် ကြေးဝါနရ Angle Valve: ဤ Angle ကမ္ဘာလုံး Valve H59 ကြေးဝါကို Integrated ပစ်မြင့်မား၏ဖန်ဆင်းသောကြောင့်ဒါဟာစသည်တို့ကိုမီးဖိုချောင်စုပ်, ရေချိုးခန်းအင်တုံ, အိမ်သာ, ရေပူစက်မှလျှောက်ထားရန်, လုံခြုံကျန်းမာ, Non-အဆိပ်ဖြစ်ပါသည် - အရည်အသွေးမြင့်ကြွေအဆို့ရှင် core...
လှည့်လက်ကိုင် 1/2 လက်မထောင့်ကမ္ဘာလုံး Valve H59 ကြေးဝါကိုပေါင်းစပ်ထားသောသွန်းပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောကြွေအဆို့ရှင်အမာခံ၊ မီးဖိုချောင်သို့သော်လည်းကောင်း၊ ရေချိုးခန်းတွင်သော်လည်းကောင်းဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတာရှည်ခံသည်။ Valve core သည်နံရံပေါ်ရှိအပေါက်ကိုဖုံးရန်အနားကွပ်နှင့်အတူရှည်နိုင်သည်။ နယ်ပယ်ကိုအသုံးပြုခြင်း -...
ချိတ်ဆက်မှုအရွယ်အစား G1 /2"X G1 / 2" နှင့်အတူထောင့်အဆို့ရှင် ဒီ Angle Globe Valve ကို H59 ကြေးဝါကိုပေါင်းစပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်ကြွေအဆို့ရှင်အမာခံ၊ မီးဖိုချောင်သုံးရေကန်များ၊ အိမ်သာများ၊ အိမ်သာများ၊ ရေပူစက်များစသည်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးကျန်းမာခြင်း၊ အဆိပ်အတောက်ကင်းစေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။...
အအေးနှင့်ပူယေဘုယျတြိဂံရေမှတ်တိုင်အဆို့ရှင် Triangle လက်ဘီးထောင့်အဆို့ရှင် သည်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအပေါက်တစ်ခုအားနံရံ၏ရေထွက်ပေါက်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည်ကျစ်လစ်ထားသောရေပိုက်နှင့် faucet နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အဆင်ပြေပြီး၊ ရေဖိအားကိုညှိခြင်း (သို့) ရေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ Triangle water...
ခေတ်မီ သောကြေးဝါ Angle Valve သည်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းသောကြေးဝါကိုယ်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးတာရှည်ခံသည် ။ 1/2 ရေကိုပိုက်ကြမ်းပြင်ကနေအခန်းထဲသို့ဝင်ဘယ်မှာနေဖြင့်ထောင့်အရှိဆုံးအသုံးပြုသော valves အိမ်ထောင်စုပိုက်လ်တာမှ Mips မဟုတ်တဲ့ချုံ့ထွက်ပေါက်ထိန်းချုပ်မှုရေစီးဆင်းမှု "Mips 1/2 x" ။ ကြေးဝါစစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်...
G1 /2လက်မပြွန်များအတွက် interface ချိတ်ဆက်ရန်သင့်လျော်သော angle valves ။ ကြေးဝါကဲ့သို့၎င်း Valve အမြန်-ပွင့်လင်း switch.High သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါအဓိကကိုယ်ထည်, ခုခံကုန်ကျစရိတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ တစ်ခုတည်းအုတ်ရိုးနံရံတပ်ဆင်ထားသည့်တပ်ဆင်ခြင်း .Ceramic cartridge အရည်အသွေးအာမခံချက် - ၅ နှစ်တာယိုစိမ့်မှုမရှိ။...
Angle Globe Valve G1 /2လက်မပြွန်များအတွက်မျက်နှာပြင်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်သင့်တော်သည်။ Angle Valves နှေးကွေးသောပွင့်လင်း switch ကို။ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောကြေးဝါ၏အဓိကကိုယ်ထည်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ တစ်ခုတည်းအပေါက်နံရံတပ်ဆင်ခြင်းတပ်ဆင်ခြင်း။ ကင်မရာကျည်၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်အချိန် - ၅ နှစ်တာယိုစိမ့်မှုမရှိ။...
အိမ်သာ Faucet & Kitchen Mixer Taps များအတွက်ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် သံမဏိရေပိုက်နှင့်ကြေးဝါ faucet များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်၊ ရေဖိအားကိုထိန်းညှိရန်သို့မဟုတ်ရေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ နံရံတစ်ခုတည်းအပေါက်တစ်ပေါက်ဒေါင်လိုက်နံရံတပ်ဆင်ခြင်း၊ single-handle လွတ်လပ်သောဒီဇိုင်း၊ တင်သွင်းသောကြွေအဆို့ရှင် Core...
ထောင့်ကမ္ဘာလုံးအဆို့ရှင် Brass Bibcock သို့မဟုတ် Bidet Shower head များ၊ သံမဏိပိုက် များနှင့်ပိုက်များမှဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သော အခြား ရေချိုးခန်းရောနှော စက်များ ဖြင့်အသုံးပြုရန် အပေါက်တစ်ပေါက်တည်းရှိသော Brass Angle Valve ။ အစိုင်အခဲ Chromed ကြေးနီဆောက်လုပ်ရေးပတ်ပတ်လည်နံရံပြားနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ။ h...
အိမ်သာ Faucet & Kitchen Mixer Taps များအတွက်ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် ထရံတွင်တပ်ဆင်ထားသောရေထွက်ပေါက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ ကျိုးထားသည့်ရေပိုက်နှင့် faucet နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်၊ ရေဖိအားကိုထိန်းညှိခြင်းသို့မဟုတ်ရေစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ Exposed-mount တစ်ခုတည်းအပေါက်ဒေါင်လိုက်နံရံတပ်ဆင်ခြင်း၊ single-handle လွတ်လပ်သောဒီဇိုင်း၊...
ကြေးဝါထောင့်အဆို့ရှင် အပေါက်တစ်ထောင့်တစ်ထောင့်စီအပေါက်တစ်ခုစီတွင် H59 ကြေးဝါကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အရည်အသွေးမြင့်ကြွေသောအဆို့ရှင်အမာခံ၊ ခရိုမီယံမျက်နှာပြင်ပြီးအပေါက်တစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ ၁.၂ "မီးဖိုချောင်စုပ်စက်၊ ရေချိုးခန်းအင်တုံ၊ ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ အိမ်သာ၊...
လိုအပ်လျှင်နေရာတိုင်းတွင်သုံးသော Angle Valve ကို faucets တပ်ဆင်ပါ။ ၎င်းသည်ရေပိုက်နှင့် faucet ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောပိုက်အားအကြားဆက်သွယ်ပေးသောသင့်လျော်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည် Brass နှင့် Chrome တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အချို့မှာသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကြွေထည်မြေထည်၊ အရည်အသွေးက ၁၀ နှစ်အတွင်းရေယိုစိမ့်မှုနှင့်သံချေးတက်ခြင်းမရှိစေရ။